DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey ee Hadaaftimo, Xaalada magaalada & Jawiga maanta waa sidee? – Puntlandtimes
DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey ee Hadaaftimo, Xaalada magaalada & Jawiga maanta waa sidee?
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ah laga dareemayo deegaankaasi, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ku gaashaam gaadiid dagaal oo gaadhaya 72 Tikniko ah ay qabsadeen deegaankaasi.
Shacabka ayaa cod dheer ku sheegay in ay la dagaalamayaan ciidamada maamulka Somaliland isla markaasna rasaas xoogan ayaa waxaa lagu furay dadka banaan baxayey oo ku dhawaaqayey erayo lidi ku ah ciidamada Somaliland.
Gaadiidka dad weynaha iyo shacab badan oo safar ahaan ayaa dib loogu celiyey magaalada Hadaaftimo, kuwaas oo kusii jeeday magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag.Xiisad culus ayaa maanta laga dareemayaa deegaanka Hadaaftimo, waxaana xaaladu u muuqataa mid sii adkaanaysa hadii ay kusii sugnaadaan deegaanka Hadaaftimo ciidamada maamulka Somaliland.
Madaxda Puntland ee iyaguna ku sugan magaalada Badhan ayaa wada qorshe safar ah oo ay isku diyaarinayaan in ay ku aadaan magaalada Garowe ee caasimada Puntland, waxaana xaalku uu yahay mid sii cuslaanaya.